Yeremiya 23 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
23 “Yeha ke abalusi abatshabalalisa nabachithachitha izimvu zedlelo lam!”+ utsho uYehova.
2 Ngoko ke utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli nxamnye nabalusi abalusa abantu bam ukuthi: “Nina nizichithachithile izimvu zam; nazisasaza, anazinikela ngqalelo.”+
“Yabonani, ndiphethulela ingqalelo yam kuni ngenxa yobubi bezenzo zenu,”+ utsho uYehova.
3 “Mna ndiya kuqokelela ndawonye intsalela yezimvu zam emazweni onke endandizisasazele kuwo,+ ndizibuyisele edlelweni lazo,+ yaye ngokuqinisekileyo ziya kuqhama zande.+
4 Ndiza kuvelisa phezu kwazo abalusi abaya kuzalusa;+ yaye aziyi koyika kwakhona, zingayi kungenwa lulo naluphi na unkwantyo,+ kungekho nanye eya kulahleka,” utsho uYehova.
5 “Khangela! Kuza imihla,” utsho uYehova, “endiya kuthi ngayo ndimvelisele ihlumelo lobulungisa uDavide.+ Ngokuqinisekileyo ke loo kumkani uya kulawula+ aze enze ngengqiqo, aphumeze okusesikweni nobulungisa elizweni.+
6 Ngemihla yakhe uYuda uya kusindiswa,+ noSirayeli uya kuhlala ngonqabiseko.+ Yaye uya kubizwa ngokuthi, UYehova UbuBulungisa Bethu.”+
7 “Ngoko ke, khangela! kuza imihla,” utsho uYehova, “abangayi kutsho ngayo kwakhona ukuthi, ‘UYehova uyaphila lowo wabanyusayo oonyana bakaSirayeli elizweni laseYiputa,’+
8 kodwa baya kuthi, ‘UYehova uyaphila lowo wayinyusayo waza wayizisa inzala yendlu kaSirayeli ivela kulo ilizwe lasemntla nakuwo onke amazwe endandibasasazele kuwo,’ kwaye ngokuqinisekileyo baya kuhlala emhlabeni wabo.”+
9 Ngokubhekisele kubaprofeti, intliziyo yam yaphukile ngaphakathi kwam. Onke amathambo am aqalise ukungcangcazela. Ndiye ndaba njengendoda enxilileyo,+ nanjengendoda eyomeleleyo eyoyiswa yiwayini, ngenxa kaYehova nangenxa yamazwi akhe angcwele.
10 Kuba ilizwe lizaliswe+ ngabakrexezi.+ Kuba ngenxa yesiqalekiso ilizwe lizilile,+ amadlelo asentlango omile;+ nekhondo labo libi, namandla abo akalunganga.
11 “Kuba kokubini umprofeti nombingeleli bangcolile.+ Nasendlwini yam ndifumene ububi babo,”+ utsho uYehova.
12 “Ngoko ke indlela yabo iya kuba njengeendawo ezimtyibilizi+ esithokothokweni, ezo baya kutyhalelwa kuzo baze ngokuqinisekileyo bawe.”+
“Kuba ndiya kubazisela intlekele, unyaka wokunikelwa kwabo ingqalelo,”+ utsho uYehova.
13 “Nakubaprofeti baseSamariya+ ndibone imposiso. Benze njengabaprofeti abavuselelwa nguBhahali,+ kwaye baqhubeka besenza abantu bam amaSirayeli ukuba babhadule.+
14 Nakubaprofeti baseYerusalem ndibone izinto eziqhiphula umbilini,+ ukukrexeza+ nokuhamba ebuxokini;+ yaye bomeleze izandla zabenzi bobubi ukuze bangabuyi,+ ngamnye ebubini bakhe. Kum bonke baye banjengeSodom,+ nabemi bayo banjengeGomora.”+
15 Ngoko ke utsho uYehova wemikhosi nxamnye nabaprofeti abo ukuthi: “Yabona, ndibadlisa umhlonyane, kwaye ndiza kubaseza amanzi anetyhefu.+ Kuba kubaprofeti baseYerusalem kuphume uwexuko+ lwaya kulo lonke ilizwe.”
16 Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Musani ukuwaphulaphula amazwi abaprofeti abaniprofetelayo.+ Banenza nibe lilize.+ Bathetha umbono wentliziyo yabo+—kungekhona okuvela emlonyeni kaYehova.+
17 Batsho kaninzi-ninzi kwabo bangenantlonelo ngam ukuthi, ‘UYehova uthethile wathi: “Niya kuba noxolo.”+ Nakuye wonke ohamba ngobulukhuni bentliziyo yakhe+ bathe, ‘Akukho ntlekele iya kunifikela.’+
18 Kuba ngubani na ome+ kwiqela lamakholwane kaYehova ukuze abone aze eve ilizwi lakhe?+ Ngubani na onikele ingqalelo kwilizwi lakhe ukuze alive?+
19 Khangela! Isaqhwithi somoya sikaYehova, umsindo, ngokuqinisekileyo siya kuphuma, isivuthuvuthu kanye.+ Siya kuvuthuza entlokweni yabo bangendawo.+
20 Umsindo kaYehova awuyi kubuya ade awuphumeze,+ ade azenze zibe yinyaniso iingcinga zentliziyo yakhe.+ Ekupheleni kwemihla niya kukunikela ingqalelo yenu oko ngokuqonda.+
21 “Andibathumanga abaprofeti, kanti bona basuke babaleka. Andithethanga kubo, kanti bona basuke baprofeta.+
22 Kodwa ukuba bebemile kwiqela lamakholwane am,+ ngoko bange bevakalise amazwi am kubantu bam, yaye bange bebabuyisile endleleni yabo embi nasebubini bezenzo zabo.”+
23 “NdinguThixo okufuphi na,” utsho uYehova, “kungekhona uThixo okude?”+
24 “Okanye ingafihlwa na nayiphi indoda kwiindawo ezifihlakeleyo ndize mna ndingayiboni?”+ utsho uYehova.
“Andizalise amazulu nomhlaba na okunene mna?”+ utsho uYehova.
25 “Ndikuvile oko bakutshoyo abaprofeti abaprofeta ubuxoki egameni lam,+ besithi, ‘Ndiphuphile! Ndiphuphile!’+
26 Kuya kude kube nini na kukho oku entliziyweni yabaprofeti abaprofeta ubuxoki nabangabaprofeti benkohliso yentliziyo yabo?+
27 Bacinga ukubenza abantu bam balilibale igama lam ngamaphupha abo abamana bebaliselana ngawo,+ kanye njengoko ooyise balilibalayo igama lam ngenxa kaBhahali.+
28 Umprofeti onephupha, makalibalise iphupha elo; kodwa lowo unelizwi lam, makalithethe ilizwi lam ngokwenyaniso.”+
“Iindiza zinantoni na yakwenza nokudla okuziinkozo?”+ utsho uYehova.
29 “Ngaba ilizwi lam ngokukwanjalo alikho njengomlilo na,”+ utsho uYehova, “nanjengesando sokuhlekeza esikroboza ingxondorha?”+
30 “Ngoko ke yabona, ndinxamnye nabaprofeti,”+ utsho uYehova, “abo bawebayo amazwi am, ngamnye kwiqabane lakhe.”+
31 “Yabona, ndinxamnye nabaprofeti,” utsho uYehova, “abo basebenzisa ulwimi lwabo ukuba bathethe besithi, ‘Ilizwi!’”+
32 “Yabona, ndinxamnye nabaprofeti bamaphupha obuxoki,” utsho uYehova, “abawabalisayo baze babhadulise abantu bam ngobuxoki+ babo nangokuqhayisa kwabo.”+
“Kodwa mna andibathumanga okanye ndibayalele. Ngoko abayi kukhe basizisele ngenelo esi sizwana,”+ utsho uYehova.
33 “Yaye xa esi sizwana okanye umprofeti okanye umbingeleli bekubuza, besithi, ‘Uyintoni na umthwalo kaYehova?’+ uze uthi kubo, ‘“Nini—Owu onjani wona umthwalo!+ Kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kunishiya,”+ utsho uYehova.’
34 Ke yena umprofeti okanye umbingeleli okanye abantu abathi, ‘Ngumthwalo kaYehova!’ nam ndiza kunikela ingqalelo kuloo mntu nakwindlu yakhe.+
35 Nimana nisitsho ngamnye kwidlelane lakhe nakumntakwabo ukuthi, ‘Uphendule wathini na uYehova? Uthethe wathini na uYehova?’+
36 Kodwa umthwalo+ kaYehova nize ningabi sawukhankanya,+ kuba umthwalo lowo uba lilizwi lakhe ngamnye,+ yaye niwatshintshile amazwi oTHIXO ophilayo,+ uYehova wemikhosi, uThixo wethu.
37 “Niya kutsho kumprofeti ukuthi, ‘Ithini na impendulo akunike yona uYehova? Uthethe wathini na uYehova?+
38 Kodwa ukuba niqhubeka nisithi “Ngumthwalo kaYehova!” ngoko ke utsho uYehova ukuthi: “Ngenxa yokutsho kwenu ukuthi, ‘Eli lizwi linguwo kanye umthwalo kaYehova,’ ekubeni ndathumelayo kuni, ndisithi, ‘Ningatsho ukuthi: “Ngumthwalo kaYehova!”’
39 ngoko ke ndim lo! Andisayi kunikhathalela kwaphela,+ ngokuqinisekileyo, yaye ndiza kunilahla phambi kwam nina nesixeko endaninika sona nina nookhokho benu.+
40 Kwaye ndiza kubeka phezu kwenu ungcikivo ukusa kwixesha elingenammiselo nokuthotywa ukusa kwixesha elingenammiselo, nto leyo ingenakulibaleka.”’”+